Ndinomboraramirei? | Bvunza Mwari
Mubvunzo 1: Ndinomboraramirei?
ROSALIND uyo akakurira kuEngland aiva nechido chakasimba chokudzidza. Aidawo kubatsira vanhu. Paakapedza chikoro, akawana basa repamusoro raisanganisira kubatsira vanhu vasina pokugara, vakaremara uye vane pfungwa dzinononoka kubata zvinhu. Pasinei nokuti aiva nebasa rakanaka chaizvo nemari yakawanda, anoti: “Kwemakore ndaizvibvunza kuti, ‘Tinomboraramirei?’ uye ‘Chinangwa choupenyu ndechei?’”
Vanhu vakasiyana nemhuka dzisingafungi. Tinokwanisa kudzidza pane zvakaitika kare, tinogona kuronga ramangwana, uye kutsvaka chinangwa muupenyu
Vakawanda vanofunga kuti tinoraramira kuwana pfuma nomukurumbira, uye vanoti ndizvo zvinoita kuti tifare.
Mhinduro iyoyo inopa pfungwa yei?
Tinoita zvatinenge tangoda muupenyu. Zvinodiwa naMwari hazvikoshi kupfuura zvatinoda.
Mambo Soromoni akaunganidza upfumi hwakawanda uye aiita zvemafaro asi akazoona kuti zvinhu izvozvo hazvina kuita kuti upenyu hwake huve nechinangwa. Akazotaura zvinoita kuti upenyu huve nechinangwa paakanyora kuti: “Pashure pokunge zvinhu zvose zvanzwiwa, mhedziso yenyaya yacho ndeiyi: Itya Mwari wechokwadi uchengete mirayiro yake. Nokuti izvi ndizvo zvose zvinosungirwa kuti munhu aite.” (Muparidzi 12:13) Kuchengeta mirayiro yaMwari kunorevei?
Chinangwa chaMwari chinosanganisira kuti isu tinakidzwe noupenyu. Soromoni akanyora kuti: “Kumunhu hapana chinhu chiri nani kupfuura kuti adye, anwe, aite kuti mweya wake ufadzwe nezvakanaka pabasa rake rakaoma. Izviwo ndakazviona, iyeni, kuti zvinobva paruoko rwaMwari wechokwadi.”—Muparidzi 2:24.
Mwari anodawo kuti tide vomumhuri medu uye tivabate zvakanaka. Cherechedza mazano anobatsira anopiwa mumwe nomumwe ari mumhuri:
Kana tikatevedzera mazano aya, tichafara uye tichagutsikana. Asi chinhu chinonyanya kukosha chatingaita ndechokudzidza zvose zvatinokwanisa nezvoMusiki wedu uye kuswedera pedyo naye seShamwari yedu. Bhaibheri rinototiudza kuti “swederai pedyo naMwari.” Rinobva rativimbisawo kuti: “Iye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Kana ukabvuma kuswedera pedyo naMwari, upenyu hwako huchava nechinangwa.
Rosalind ambotaurwa akazoziva chinangwa choupenyu. Verenga papeji 10 yemagazini ino uone zvaanoti ndizvo zvakaita kuti achinje maonero ake.Kuti uone zvaanoti ndizvo zvakaita kuti achinje maonero ake verenga nyaya yakanzi “Bhaibheri Rinochinja Upenyu”.
Jesu Akatii Nezvechinangwa Choupenyu?
Jesu ainyatsoziva chinangwa choupenyu hwake. Akati: “Izvi ndizvo zvandakaberekerwa, uye ndizvo zvandakauyira munyika, kuti ndipupurire chokwadi.” (Johani 18:37) Jesu akapedza upenyu hwake hwose achidzidzisa chokwadi nezvaMwari uye zvinangwa zvake.
Kana tikatevedzera zvaiitwa naJesu upenyu hwedu huchava nechinangwa. Jesu anototikurudzira kuti timutevedzere. (Mateu 11:29) Ngatimbokurukurai nzira mbiri chete dzatingamutevedzera nadzo.
Jesu akadzidzisa kuti kana tichida kufara, tinofanira ‘kuziva zvinodiwa zvedu zvomudzimu.’ (Mateu 5:3) Izvi zvinoreva kuti tinofanira kuwana zivo pamusoro ‘paMwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya waakatuma, iye Jesu Kristu,’ zvoita kuti tive noukama hwakanaka naMwari.—Johani 17:3.
Jesu akarayira vateveri vake kuti vadzidzise vamwe zvavakanga vadzidza. Akati: “Naizvozvo endai munoita kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neromudzimu mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurayirai.”—Mateu 28:19, 20.
Vaya vanotsvaka kuva noukama naMwari kupfurikidza nokudzidza Bhaibheri uye kuita zvarinotaura, vanova noupenyu huri nani. Uyewo pavanotanga kubatsira vamwe kuti vadzidze nezvaMwari, vanogutsikana kuti upenyu hwavo hune chinangwa chaicho.
Zvinoita kuti tirarame upenyu hunofadza Jehovha. Unotogona kuva shamwari yake.